The Ulwazi Programme – A digital community library of local knowledge in Durban, South Africa
Funda ngolimi lwakho, efonini yakho / Learn in your language, on your phone
isiZulu Kubantu abayizigidi eziyizinkulungwane ezingu-1.3 ezwenikazi lase-Afrika, ucabanga ukuthi bangaki abakhuluma isiNgisi, isi-French, isi-Jalimane noma olunye ulimi lwaseYurophu njengolimi lwabo lokuqala? Yize lezi zilimi zijwayelekile kwezamabhizinisi, ezemfundo, ezokukhangisa kanye ne-inthanethi, kungakumangaza ukwazi ukuthi u-0.5% kuphela wabantu base-Afrika abakhuluma isiNgisi njengolimi lwabo lwebele. Kusobala kukhona ukunganakwa kwezilimi zase-Afrika. Ingakho-ke iDiji – inkundla yokufunda nge-inthanethi ngezilimi zase-Afrika … Read more
Categories News Tags Diji, diji.africa
Ukukhululwa ejele nokwamukelwa ngomkhuleko kukaNxamalala
Wagcina ephumile ejele owayenguMongameli wakulelizwe uMnzaneum Gedleyihlekise Mhlanganyelwa Zuma. Kuzokhumbuleka ukuthi uMsholozi besike sabhala ngaye kulengosi yolwazi lwesintu sibhunga indaba yokuboshwa kwakhe. Eze eboshwe nje wayekade enqabe ukuqhubeka nokuthula ubufakazi kwiZondo commission mayelana nezinquma ezathathwa uhulumeni ngesikhathi sobuholi bakhe engumongameli. Isigwebo sakhe wayesiqale ngomhlaka 08 Julayi ejele lase-Escourt. Isizathu esenza ukuba akhululwe ejele abahlangekazi bakhale … Read more
Categories News, People Tags Duduzile Zuma, Jacob Zuma, Moses Mabhida
UThemba Mkhize, wazalelwa eThekwini ngo-1957, wethulwa emculweni esemncane. Waze umculo we-jazz esafunda amabanga aphakeme futhi wabonwa yiqembu lendawo, i- “Dukes Combo“. Ngo-1981 waqala ukwenza umsebenzi wobungcweti neqembu “iSakhile”. Ngo-1984 uThemba wajoyina iqembu elidumile i- “Bayete”, futhi waba yingxenye yeqembu elihlonishwayo iminyaka engaphezu kweyishumi. Wabamba iqhaza emdlalweni womculo othi “Buwa”, owabhalwa nguCaiphus Semenya futhi wazulazula e-Afrika, … Read more
Categories People Tags Hugh Masekela, Themba Mkhize
Ukufika kweCovid 19 kushintshe izinto eningi. Umkhosi Womhlanga oba khona minyaka yonke ngomunye wemigumbo omkhulu obuthintekile. Ngonyaka owedlule (2020) ngenxa yomigomo yeCovid lomcimbi wenzewa usuku olulodwa esikhundleni sezinsuku eziwu-4. Kusenjalo nezintombi zamiswa kwamenywa izintombi eziwu-30 kuphela ukuzothamela lomcimbi esigodlweni eNyokeni, kwaNongoma. Yize kunombango ngesihlalo sobukhosi ngemuva kokukhothama kwenkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini Zulu owalandelwa eduze undlukulu … Read more
Categories Culture, History, News Tags Reed Dance, umkhosi womhlanga
UMoses Tembe udabuka endaweni esenyakatho neKwaZulu Natal eJozini. Wazalwa ngo-1963. Uneziqu ze-BA in Public Administration and Political Science azithola e-Unisa wabuye waphothula i-Caltex Business Management Programme e-University of Cape Town. UMnumzane Tembe waklonyeliswa nge-I nvestec Bank / Sunday Tribune Entrepreneur Award ngo-2002. UMoses Tembe usebenze njengo: Secretary General and Vice President of the KZN branch … Read more
Categories People Tags Moses Tembe
Imashi yaboNyazi Lwezulu
Kugcwale izivatho ezimhlophe izinkumbi zamalunga eBandla lamaNazaretha, ezingaphuzu kuka-6000, zimasha eThekwini ngoLwesibili (28.09.2021). Lamalunga akhonza kwisigceme saseBuhleni abephume ngobuningi bawo ezotshengisa ukweseka umholi wawo uMduduzi ‘Unyazi’ Shembe. Uzokhumbula ukuthi isigceme saseBuhleni nesaseThembezinhle saqala ukubanga isikhundla sobuholi ngemuva kokudlula emhlabeni kowayeyinkosi uVimbeni “Uthingo” Shembe. Lo mbango phakathi kukaMduduzi ” Unyazi Lwezulu” (oyindodana yoThingo) nomalume wakhe uVela … Read more
Categories News, People Tags AmaNazaretha, Ibandla lamaNazaretha, Imashi yoNyazi lwezulu